ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဖြောင့်တယ် မတ်တယ် ဆိုတာ...”
ကျွန်တော့်မျိုးချစ် စိတ် ကို မှတ် ကျောက် တင် ခံ ရဲ တယ် ဆို တဲ့ သွား လေ သူ ဗိုလ် ခင်ညွှန့် ရဲ့ စကား ကို သွား သတိ ရ သ ဗျာ ။ အခု တော့ တရား တွေ တောင် ရ လို့ ဆို ပါ လား ။ သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ် မိ ပါ ရဲ့ ။
ဟုတ်ပါသဗျ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အကောင်းစားလေး ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင် ဒေါနဲ့ မာန်နဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကတဆင့် ပြောခဲ့တာလေးကို အခုစဉ်းစားရင် မနေ့တနေ့ကလိုဘဲ ပြန်လည်မြင်ယောင်မိတော့တယ်ခင်ဗျာ။ သူဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့….
“ခင်ညွန့်…. ဟွန်းဟွန်းဟွန်း (ရယ်သံ)…. ဟုတ်ပါတယ်…ဦးကြည်မောင်ပြောသလို…..ခင်ညွန့်ပါ။ ခင်ညွန့်ဟာ ငယ်တယ်ဆိုပေမယ့် မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ နေရာမှာ ခင်ညွန့်တို့လည်း ဦးကြည်မောင်နဲ့ ယှဉ်ရဲပါတယ်” လို့ စိန်ခေါ်သွားပါသဗျ။
Your post has changed my opinion of Dr Chee and his struggle. It is very deplorable for the people of Singapore that all the media here treat Lee family as the untouchable and Dr Chee has not got his fair share in SG media coverage. I feel Singaporeans have chosen survival at the expense of freedom.